"အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီး အရင်ထက်နုပျိုလှပလာရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ မေကဗျာ'' - Cele Gabar
“အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီး အရင်ထက်နုပျိုလှပလာရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ မေကဗျာ”
လက်ရှိမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားကာ live saleလေးတွေပဲ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့”အဓိဌာန် ၉ ရက်ပြည့်နေ့စဉ်ကုသိုလ် အဓိဌာန်🙏🙏🙏ကဗျာ့၏အားကိုးရာ…..ဘာလ်ို့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလဲ…. ဘာသာရေးလုပ်လို့ဘာလ်ို့ လှလာတာလဲ…..ဘာသာရေးလုပ်လို့ဘာလို့ နုနေတာလဲ………ဘာသာရေးလုပ်လ်ို့ဘာလို့ရောင်းကောင်းနေတာလဲ….ဘာသာရေးလုပ်လို့ကဗျာ့ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းရဲ့အဖြေလေးပါ ကဗျာဘာသာရေးကိုအကျိူးမမျှော်ပဲ ယုံကြည်စွာ သိတတ်တဲ့အရွယ်မှစ အခုမအားတဲ့အချ်န်ထိ အချိန်ပေး မပျက်မကွက် လုပ်လ်ို့ပါ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပရိသတ်တွေသိချင်နေတဲ့အဖြေလေးကိုပြောပြလာခဲ့တာပါ။
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အရွယ်ကျမသွားဘဲနုသထက်နုပျိုလာတဲ့မေကဗျာရဲ့မအိုဆေးကတော့တကယ့်ကို လူတိုင်းလိုက်ပြီးပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးပါပဲနော်။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း မေကဗျာရဲ့ အဖြေလေးကိုသဘောကျရင် လိုက်လံပြုလုပ်နိုင်ကြဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
“အလုပ္ေတြအဆင္ေျပၿပီး အရင္ထက္ႏုပ်ိဳလွပလာရတဲ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟေျပာျပလာတဲ့ ေမကဗ်ာ”
လက္ရွိမွာအႏုပညာအလုပ္ေတြကိုရပ္နားထားကာ live saleေလးေတြပဲ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့”အဓိဌာန္ ၉ ရက္ျပည့္ေန႔စဥ္ကုသိုလ္ အဓိဌာန္🙏🙏🙏ကဗ်ာ့၏အားကိုးရာ…..ဘာလ္ို႔အလုပ္ေတြအဆင္ေျပလဲ…. ဘာသာေရးလုပ္လို႔ဘာလ္ို႔ လွလာတာလဲ…..ဘာသာေရးလုပ္လို႔ဘာလို႔ ႏုေနတာလဲ………ဘာသာေရးလုပ္လ္ို႔ဘာလို႔ေရာင္းေကာင္းေနတာလဲ….ဘာသာေရးလုပ္လို႔ကဗ်ာ့ကိုေမးတဲ့ ေမးခြန္းတိုင္းရဲ႕အေျဖေလးပါ ကဗ်ာဘာသာေရးကိုအက်ိဴးမေမွ်ာ္ပဲ ယုံၾကည္စြာ သိတတ္တဲ့အ႐ြယ္မွစ အခုမအားတဲ့အခ်္န္ထိ အခ်ိန္ေပး မပ်က္မကြက္ လုပ္လ္ို႔ပါ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ပရိသတ္ေတြသိခ်င္ေနတဲ့အေျဖေလးကိုေျပာျပလာခဲ့တာပါ။
ဘယ္အခ်ိန္ၾကည့္ၾကည့္အ႐ြယ္က်မသြားဘဲႏုသထက္ႏုပ်ိဳလာတဲ့ေမကဗ်ာရဲ႕မအိုေဆးကေတာ့တကယ့္ကို လူတိုင္းလိုက္ၿပီးျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေလးပါပဲေနာ္။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း ေမကဗ်ာရဲ႕ အေျဖေလးကိုသေဘာက်ရင္ လိုက္လံျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ” အလွမ်းရဆုံးငယ်ဘဝအမှတ်တရတစ်ချို့ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ရွှေထူး”
Next post ” မပြသခင်ကတည်းက ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရရှိထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့ ကျော်ထက်ဇော်”